१८ हजार बर्ष पुरानो कुकुर जस्ताको तस्तै भेटिए पछि वैज्ञानिकहरु चकित, खुल्दै यस्तो रहस्य - ज्ञानविज्ञान
कुकुरलाई मानव सभ्यतामा मान्छेले सबै भन्दा पहिले घरपालुवा बनाएको मानिन्छ ।
धर्म शास्त्रहरुमा पनि कुकुरको महिमा बेग्लै छ । महाभारतमा कुकुरलाई युधिष्टिरसँगै स्वर्गमा जिउँदै पुगेको एकमात्र जनवारका रुपमा लेखिएको छ ।
वैज्ञानिकरुपमा तथ्य र प्रमाणहरुको आधार केलाउँदा पनि कुकुर भन्दा पहिले मानिसले घरपालुवा बनाएको कुनै पनि अर्को जनवार भेटिएको छैन तर कुकुर कहिलेदेखि घर पालुवा जनवार भयो भन्नेमा चै वैज्ञानिकहरु पनि एक मत छैनन् ।
सन् २०१७ मा प्रकाशित एक अध्ययनले २० देखि ४० हजार बर्ष पहिले ब्वाँसोलाई घरपालुवा बनाउँन थालिएको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै अर्को दाबी अनुसार तत्कालिन जंगली ब्वाँसो मानिसलाई आक्रमण गर्दा ब्वाँसो घाइते भएको र उसलाई कुनै दयालु मानिसहरुको समूहले पालेर त्यसका पुस्ताहरु विस्तारै मानिसप्रति वफादार हुन थालेको हो ।
यस्तै वैज्ञानिकहरुको अर्को दाबी के छ भने कुकुरलाई मानिसले घरपालुवा बनाएको नभएर कुकुर स्वयम मानिसहरुको नजिक हुन थालेको थियो । मानिसहरुको उब्रेको रहलपहल खान मानिसको पछि लाग्दा लाग्दै कुकुर मानिसप्रति वफादार हुन थालेको हो ।
यस्ता दाबी जे भए पनि कुकुर र मानिसको सम्बन्ध एकदमै रोचक छ । कुकुर मानिसका लागि आफ्नै हातले बनाएको रोबोट जस्तो देखिन्छ । यस्तै रोचक तथ्य भर्खर सार्वजनिक भएको छ ।
रुसको सबै भन्दा चिसो स्थान साइबेरियामा छाउरो कुकुरको एउटा लाश भेटियो । जसको शरिरमा दाँत र भुत्लाहरु जस्ताको तस्तै थिए ।
कार्बन डेटिङबाट त्यसलाई परिक्षण गर्दा एउटा अचम्मको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले सो कुकुर १८ हजार बर्ष पुरानो ४ महिनाको भएको पत्ता लगाए ।
अझ रोचक कुरा के हो भने, सो कुकुरको वास्तविक प्रजाति के हो भन्ने पत्ता लाग्न भने सकेको छैन । अहिले सम्म डिएनए प्राप्त गरिएका कुकुर र कुकुरका वंशज मानिएका ब्वाँसोसँग पनि यसको डिएनए मिलेन ।
वैज्ञानिकहरुले यसको अनुसन्धान सघनरुपमा अगाडी बढाइरहेका छन् तर हिउका कारण नकुहिएर जस्ताको तस्तै रहेको यो जीव ब्वाँसो र कुकुरबिचबाट जन्मिएको हुन सक्ने अनुमान भने गरेका छन् ।
यो प्रारम्भिक अनुमान मात्रै हो । अब यसबारे थप अनुसन्धान गरे पछि नयाँ तथ्यहरु सार्वजनिक हुने नै छन् ।
स्विडेनका अनुसन्धानकर्ता डेभ स्टान्टनले सीएनएनलाई कुकुर र ब्वाँसो दुवै प्रजातिको साझा पुर्खा हुन सक्ने बताएका छन् । यो कुकुर मर्दा २ महिनाको रहेको पाइएको छ । रेडिओकार्बन प्रविधिबाट छाउरोको मृत्यु हुँदाको उमेर र कति समय यो हिउँमा रह्यो भन्ने कुरा पत्ता लागेको हो । यहि प्रबिधिको प्रयोगबाट कुकुरको उमेर पत्ता लागेको हो ।
त्यो मृत छाउरोको अहिले डगर नाम राखिएको छ । स्थानिय भाषामा डगरको अर्थ साथी भन्ने हुन्छ ।
हामीले घरमा पाल्ने कुकुरका बारेमा रोचक तथ्य पढ्नुहोस्
Don't Miss it यी १० उपायहरुले तपाईको फोनलाई चाडै बिग्रनबाट जोगाउछ ! के – के हुन्, जान्नुहोस् !
Up Next रुघाखोकी निको पार्ने घरेलु तरिका जान्रुहाेस्